बैंक Archives - AarthikBikash
काभ्रे: काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका स्थित ठूलो वनमा अपांगमैत्री इको ट्रेल निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा इको ट्रेल र दुईवटा वडालाई पुरात्वतिक शहरका रुपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि काम अघि बढ्ने भएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको प्रविधिक टोलीले इको ट्रेल र पुरात्वतिक शहरका बारे लागत […]
काभ्रे : काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१३ स्थित भैंसेपाटीमा मोटरसाइकल दु’र्घटना हुँदा चार जना घा’इते भएका छन्। अरनिको राजमार्गमा आइतबार दिउँसो काठमाडौंबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको प्रदेश नं. ३–०२–००७ प ४३४७ को मोटरसाइकलसँग विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश नं. ३–०२–०११ प ३६१३ र बा ७५ प ६८७६ नम्बरको तीनवटा मोटरसाइकल आपसमा ठो’क्किएका काभ्रे प्र’हरीले जनाएको छ। काभ्रेका सूचना […]
काभ्रे, कात्तिक २३ : काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–११ भैंसे डाँडाका सुब्बा सार्कीलाई ढुंगा प्रहार गरी हत्या गर्ने सन्तोष नेपाली पक्राउ परेका छन् । शनिबार विहान सार्की र सोहि ठाउँका खड्ग बहादुर नेपालीबीच जग्गाको विषयमा विवाद बढ्दै जांदा सार्कीले नेपालीलाई बञ्चरो प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएका थिए । नेपाली घाईते भइपछि उनका छोरा सन्तोषले सार्कीलाई पछाडीबाट ढुंङ्गाले […]
नवलपरासी : दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘चालकसँग एक मिनेट’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरमा राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्र केन्द्रित गरी यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मुनेन्द्र थापाले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशभरि नै यो कार्यक्रम […]
केयुले मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित
काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)ले अनलाइन कक्षा सञ्चालन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क पनि लिन थालेपछि केयुका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। विद्यार्थीले सेवा नलिएका शीर्षकको पनि केयुले शुल्क लिएको भन्दै विश्वविद्यालयका स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ, स्कुल अफ साइन्स्, स्कुल अफ ल र स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले आइतबार विश्वविद्यालय परिसरमा नै रिले अनशन थालेका हुन्। अनेरास्ववियु,काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रभावशाली विद्यार्थी नेता […]
काभ्रेका थप १ जना कोरोना संक्रमितको निधन, ३१ जनाले भाइरस जिते
काभ्रे, २३ कात्तिकः काभ्रेका थप १ जना कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका अनुसार नमोबुद्ध नगरपालिकाका ८३ बर्षीय पुरुषको निधन भएको हो । शुक्रबार कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका ती पुरुषको आज घरमा निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो । यो सँगै जिल्लामा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको […]
धुलिखेल, २३ कात्तिकः भुकम्पमा क्षति पुगेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर २ रविओपीमा रहेको सेतीदेवी माविको भवन बन्ने भएको छ । नयाँ बन्न लागेको भवनको आइतबार नगरप्रमुख अशोक कुमार ब्याञ्जुले शिलान्यास गर्नुभएको हो । एशियाली विकास बैंक र धुलिखेल नगरपालिकाको गरी ४ करोड ५ लाखमा भवन निर्माण हुनेछ । २२ कोठे पक्की भवन निर्माण हुनेछ । […]
जो बाइडनले जिते ५९ इलेक्टोरल मतले राष्ट्रपतिको चुनाव
आइतवार, कार्तिक २३ / संयुक्त राज्य अमेरिकाकाे राष्ट्रपतीय चुनावमा जो बाइडेन विजयी हुनुभएको छ । योसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । जो बाइडेनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तथा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई ५९ इलेक्टोरल मतले पछि पार्दै राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नो जित पक्का गर्नुभएको हो । योसँगै भारतीय मूलकी […]
राजाराम गाैतमकाे नेतृत्वमा “याेगदान राष्ट्रकाे लागी” काभ्रेपलाञ्चोक शाखा गठन
काभ्रेपलाञ्चोक : याेगदान राष्ट्रका लागि काभ्रेपलाञ्चाेक शाखा गठन भएकाे छ । भेलाले सर्वसम्मत रुपमा राजाराम गाैतमकाे अध्यक्षतामा २१ समिति सदस्य चयन गरेकाे छ । समितिकाे उपाध्यक्षमा जीवन पराजुलि, सचिव प्रविन सापकाेटा, सह-सचिव ई. कुमार तिमल्सिना (अाईटि संयाेजक), काेषाध्यक्ष सुवास सापकाेटा, सदस्यहरुमा सुरज श्रेष्ठ (सञ्चार संयाेजक), बिपिन खत्रि (स्वास्थ संयाेजक), यश कुमार परियार (सञ्चार सह- संयाेजक), […]
काठमाडौं: गायिका एलिना चौहानको नयाँ गीत ‘तरुनी’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गीतमा एलिनालाई यम कुमार मल्लले पुरुष स्वरमा साथ दिएका छन । डान्सिङ शैलीमा तयार भएको यस गीतको शब्द तथा संगीत बिशाल थिङ्गले तयार गरेका हुन्। उक्त गीतलाई बालकृष्ण सेवाचार्यले एरेन्ज गरेका हुन् । भिडियोमा सन्देश रिमाल र इश्मा मल्लको अभिनय रहेको छ। सन्देश […]